ဆော့ဖျဝဲဒီဇိုင်းပုံစံများ – GOF – တေလာ Lopes ツဘလော့
ဆော့ဖျဝဲဒီဇိုင်းပုံစံများ – GOF
၏ခွဲခြား 23 ဒီဇိုင်းပုံစံများ (ဒီဇိုင်းပုံစံ) ဆော့ဖျဝဲ, ဒုတိယ “GoF” (လေး၏ဂိုဏ်း).
ဒီမှာစိတ်ကူးဒီဇိုင်းပုံစံများခွဲခြားရန်အဘယ်အရာနှင့်မည်သို့ပြပါရန်ဖြစ်ပါသည်, ဒီတစျယောကျတညျးလုပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ထားပြီးအများပြည်သူနူးညံ့သောကိစ္စရပ်များကိုတာကိုဖြေရှင်းရန်အလွန်အသုံးဝင်သောဖြစ်, သာမြင်:
တစ်ဦးလူတန်းစား၏ပြည်နယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ switch ကိုရန် GUI ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတန်းလိုလား. သို့သော်, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူသည်ဤအတန်းအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်မှီဖန်တီးဖို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး. အမူအကျင့်ဒီဇိုင်းကိုဘယျလိုပုံစံဒီအခြေအနေကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးကိုက်ညီနေသည်?
( ) သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ
( ) လေ့လာသူ
( ) စိတ္တဇစက်ရုံ
( ) ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မေးခွန်းပိုပြီးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ဟန်, ဒါပေမယ့် note ကိုသငျသညျကိုသာခွဲခြားသိတယ်လျှင်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောခံယူချက်နှင့်အတူကဝင်တိုက်နိုင်. အဆိုပါအသေးစိတ်တောင်းသောအပိုင်း၌တည်ရှိ၏ “အမူအကျင့်ပုံစံဒီဇိုင်း”, နှင့်တစ်ဦးတည်းသာအခြားရွေးချယ်စရာကြောင်းကိုက်ညီတဲ့လည်းမရှိ, အဆိုပါ Observer ပုံစံ. ပြဿနာပြေလည်, အလွယ်တကူ!
မှတ်ချက်ကို default ပြုလုပ် သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ ကိုယ်ကသာအဘို့အအရာဝတ္ထုအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးအတန်းမှလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်ကြောင့်စားပွဲရှိုးရာဖြစ်ပါသည် 24 ratings (မဟုတ် 23).
Decorating သင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမကျမည်အကြောင်း, ဒါပေမယ့်သိပ်လေ့လာမှုနှင့်အတူ, ဒီအစွန်အဖျားသင်အချိန်ကိုကယျတငျနိုငျ “H ကို”. ဤအစံချိန်စံညွှန်းကိုအလှဆင်ဖို့လွယ်ကူသောလမ်း mnemonics မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်သူမျှမဘလော့ RogérioAraújo ဒါဟာအလွန်ဖန်တီးမှုလမ်းရှိပါတယ်, သင်ရုံနှစ်ခုစာကြောင်းကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်ပြီးသားကောင်းတစ်ဦးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်:
တစ်ဦး အလုပ်ရုံ ြဒပ်မဲ့သော တည်ဆောက် တစ်ဦး ရှေ့ပြေးပုံစံ သာ!
ဘာသာပြန်ချက်: စက်ရုံတစ်ရုံ (စက်ရုံ Method ကို) ြဒပ်မဲ့သော (စိတ္တဇစက်ရုံ) တည်ဆောက် (တည်ဆောက်သူ) ရှေ့ပြေးပုံစံ (ရှေ့ပြေးပုံစံ) သာ (Singleton).
တစ်ဦးက ပိုတငျး အဆင်ပြေအောင် ထိုသို့ compote ၏ အလှဆင် na မျက်နှာစာ အလေးချိန်များအတွက် ယင်ကောင် ဖြစ် "aproxymar"!
ဘာသာပြန်ချက်: တစ်ဦးကတံတား (တံတား) အဆင်ပြေအောင် (သငျ့လျြောအောငျပွုပွငျသောစကျ) comprises (Composite) အလှဆင် (ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း) အဆိုပါမျက်နှာစာပေါ် (မျက်နှာစာ) အဆိုပါ flyweight မှ (Flyweight) "aproxymar" လျှင် (proxy).
သူစံချိန်စံညွှန်းများသင်ယူခြင်း ဖန်တီးခြင်း နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ကြွင်းသောအရာစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည် အမူအကျင့်.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) တစ်ဦးလူတန်းစား၏ interface ကိုအခြား interface ကိုသို့ပြောင်း, ဖောက်သည်များကမျှော်လင့်ထား, သဟဇာတ interfaces နှင့်အတူအတန်းအတူတူအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြု, အဘယ်အရာကို, မဟုတ်ရင်, ကမဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) တစ်ဦး subsystem သို့အတွက် interfaces အစုတခုအဘို့အမြင့်မားအဆင့်အထိတစ်ခုတည်း interface ကိုပေး. အခြားစကား, ဒါဟာတစ်ဦး API ကိုအမျိုးမျိုး features တွေတစ်ခု interface ကိုထောက်ပံ့ (စုဆောင်းခြင်းအတန်း) ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခု.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) တစ်ဦးချင်းစီတ္ထုများနှင့်တစ်ပုံစံတည်း, ဤအရာဝတ္ထု၏ရေးစပ်သီ၏ကုသမှု Allow.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) Decoupling (ခှဲခွား) ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအနေဖြင့်တစ်ဦး abstraction နှစ်ဦးစလုံးလွတ်လပ်စွာကွဲပြားနိုင်အောင်.
(ဖန်တီးခြင်း) တစ်ဦးလူတန်းစားတစ်ဦးတည်းသာဥပမာအားဖြင့်ရှိကြောင်းသေချာကြောင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ access point ပေး.
(အမူအကျင့်) တဦးတည်းအရာဝတ္ထုပြည်နယ်ပြောင်းလဲသည့်အခါဒါမှတ္ထုများအကြားတဦးတည်း-to-အများအပြားဆကျဆံရေးအပျေါမှီခို Set, ၎င်းတို့၏မှီခိုအကြောင်းကြားအလိုအလျောက် update လုပ်နေကြတယ်.
(အမူအကျင့်) ကြောင်းတစ်ခုလုံးဘယ်လိုအရာဝတ္ထုအစုတခုအနေနဲ့ object ကို Define interactive.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) object တစ်ခုကအခြားမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မှတဆင့်တစ်ဦးကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်အချက်ပေး. ဒါ့အပြင်သူကအငှားအဖြစ်လူသိများသည်.
(အမူအကျင့်) Compose တန်းဒေသတွေ objects, ကမှတဆင့်, အစေခံရန် object တစ်ခုသည်အထိတောင်းဆိုမှုလွှဲအပ်. ဒါကတောင်းဆိုမှု၏ပေးပို့သူနှင့်၎င်း၏ addressee အကြားနားချင်းဆက်မှီကာကွယ်ပေးသည်, တစ်ဦးထက်ပိုအရာဝတ္ထုလက်ကိုင်အဘို့အခွင့်အလမ်းတောင်းဆိုမှုပေးခြင်း.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) အသုံးပြုမှုထိထိရောက်ရောက်ရှုပ်ထွေးသောတ္ထု၏ကြီးမားသောပမာဏလွှဲပြောင်းကိုထောကျပံ့ဖို့ဝေမျှ (ဒဏ်ငွေ-grained).
စက်ရုံ Method ကို
(ဖန်တီးခြင်း) object တစ်ခုဖန်တီးကာ interface ကိုသတ်မှတ်ပေမယ့် subclasses instantiate မှရသောလူတန်းစားဆုံးဖြတ်ပါစေ. ရွှေ့ဆိုင်း instantiation subclasses အားခွင့်ပြု.
(ဖန်တီးခြင်း) သူတို့ရဲ့ကွန်ကရစ်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲဆက်စပ်သို့မဟုတ်မှီခိုအရာဝတ္ထုများ၏မိသားစုများအတွက် interface ကိုပေး.
(အမူအကျင့်) ဒါဟာသူတို့ရဲ့ status ကိုနောက်ပိုင်းမှာပွနျလညျထူထောငျရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့် object တစ်ခု၏ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်တွေကိုသိမ်းဆည်း (ပြန်လုပ်ရ).
template Method ကို
(အမူအကျင့်) စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွက်တစ်ဦး algorithm ကို၏အရိုးစုသတ်မှတ်, အခြို့သောခြေလှမ်းများထွက်ခွာ subclasses အားဖြင့်ပြည့်ဝကြလိမ့်. ယင်း၏ subclasses င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲတစ်ဦး algorithm ကိုအချို့ခြေလှမ်းများကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကခွင့်ပြုသည်.
(အမူအကျင့်) object တစ်ခုက၎င်း၏အပြုအမူနှင့်၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောင်းလဲ Allow.
(အမူအကျင့်) algorithms တစ်မိသားစုသတ်မှတ်, တစ်ဦးချင်းစီ encapsulate သူတို့ကိုလဲလှယ်စေ.
(အမူအကျင့်) အရာဝတ္ထုတောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ် Encapsulating, ဖောက်သည်များကွဲပြားခြားနားသောတောင်းဆိုမှုများကို parametrizarem များအတွက်.
(အမူအကျင့်) ဘာသာစကားတခုပေးထား, စကားပြန်မှတဆင့်၎င်း၏သဒ္ဒါများအတွက်ကိုယ်စားပြုမှုသတ်မှတ်.
(ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ) သည် dynamically object တစ်ခုမှအပိုဆောင်းတာဝန်များကိုပူးတွဲ.
(အမူအကျင့်) ၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှုဖော်ထုတ်မပါဘဲဆင့်ကဲကဆက်ပြောသည်တစ်ခုအရာဝတ္ထု၏ access ကိုဒြပ်စင်မှတစ်လမ်းပေး.
(အမူအကျင့်) object တစ်ခုတည်ဆောက်ပုံ၏ဒြပ်စင်ပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေခံရဖို့ထားတဲ့စစ်ဆင်ရေးကိုယ်စားပြု. ဒါဟာသင်ကလုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာအတွက်ဒြပ်စင်များ၏အတန်းပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲသစ်တစ်ခုစစ်ဆင်ရေးသတ်မှတ်ခွင့်ပြု.
RogérioAraújo – အသက်, အိုင်တီနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ပွဲ
စုစုပေါင်း access: 4783
26 အောက်တိုဘာလ 2012 တေလာ Lopes	အဆင့်သတ်မှတ်ချက် gof, ဒီဇိုင်းပုံစံ, လေးယောက်ဂိုဏ်း, gof, ဆော့ဖျဝဲဒီဇိုင်းပုံစံများ
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 2.901.498 ဝင်ရောက်ခွင့်